ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်သေးတဲ့အခိန်မှာတောင် ဦးနှောက်ထဲမှာ အဖေ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စွဲလန်းနေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းညီ… – Shwewiki.com
ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်သေးတဲ့အခိန်မှာတောင် ဦးနှောက်ထဲမှာ အဖေ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စွဲလန်းနေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းညီ…
December 11, 2020 By admin Celebrity
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာမင်းညီကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားပြီးလုပ်ကိုင်နေသလို သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးကိုလည်း သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းညီက သူ့ရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက်ဇနီးလေးနဲ့အတူတူ သမီးနှစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက်ကို မွေးဖွားပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးကို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့ မင်းညီတို့ မိသားစုလေးက ပရိသတ်တွေချစ်ခင် အားကျရတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲ။
မင်းညီရဲ့ သမီးအလတ်လေး မှုံရွှေရည်သန့်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက နေအိမ်မျက်နှာ ကျက်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့် ဦးနှောက်လှုပ်သွားခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမီးလေးကို အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ မင်းညီက အဖေ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စွဲလန်းနေတဲ့သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းကို “ဖေဖေ့လက်လေးကိုကိုင်ထားချင်တာတဲ့။
အဖေအလုပ်လုပ်တဲ့ဘေး နေချင်လို့ ပုံမှန်မဖြစ်သေးတဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာ အဖေ့ကို ချစ်တဲ့စိတ် အပြည့်နဲ့… စွဲလန်းနေတဲ့သမီးလေး…. အမြန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေချင်မိတယ်” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးထား ပါတယ်။
မင်းညီရဲ့ သမီးအလတ်မလေးကတော့ ကြီးကြီးမားမား ဒဏ်ရာမရရှိပေမယ့် ဦးနှောက်လှုပ်သွားတဲ့အရှိန်ကြောင့် ဘာစားစားအန်ပြီး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း မင်းညီရဲ့ သမီးလေး အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာမင္းညီကေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္ကိုင္ေနသလို သူ႔ရဲ႕ မိသားစုေလးကိုလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မင္းညီက သူ႔ရဲ႕ ပါရမီျဖည့္ဖက္ဇနီးေလးနဲ႔အတူတူ သမီးႏွစ္ေယာက္၊ သားတစ္ေယာက္ကို ေမြးဖြားပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး သူ႔ရဲ႕ မိသားစုေလးကို ပရိသတ္ေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ဂ႐ုတစိုက္ရွိတဲ့ မင္းညီတို႔ မိသားစုေလးက ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္ အားက်ရတဲ့ မိသားစုေလးပါပဲ။
မင္းညီရဲ႕ သမီးအလတ္ေလး မႈံေ႐ႊရည္သန႔္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေနအိမ္မ်က္ႏွာ က်က္ကေန ျပဳတ္က်ခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္လႈပ္သြားခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သမီးေလးကို အနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ မင္းညီက အေဖ့ကိုခ်စ္တဲ့စိတ္နဲ႔ စြဲလန္းေနတဲ့သမီးေလးကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္းကို “ေဖေဖ့လက္ေလးကိုကိုင္ထားခ်င္တာတဲ့။
အေဖအလုပ္လုပ္တဲ့ေဘး ေနခ်င္လို႔ ပုံမွန္မျဖစ္ေသးတဲ့ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အေဖ့ကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ အျပည့္နဲ႔… စြဲလန္းေနတဲ့သမီးေလး…. အျမန္ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစခ်င္မိတယ္” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ မွ်ေဝေပးထား ပါတယ္။
မင္းညီရဲ႕ သမီးအလတ္မေလးကေတာ့ ႀကီးႀကီးမားမား ဒဏ္ရာမရရွိေပမယ့္ ဦးေႏွာက္လႈပ္သြားတဲ့အရွိန္ေၾကာင့္ ဘာစားစားအန္ၿပီး ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း မင္းညီရဲ႕ သမီးေလး အျမန္ဆုံးေနေကာင္းသက္သာဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါဦးေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ လို႔ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
မေမေဒီးဒီရဲ့သီချင်းသစ်လေးကို mood အပြည့်နဲ့နားထောင်ရင်း သီချင်းလေးလိုက်ညည်းနေတဲ့ Treasure လေးရဲ့ချစ်စရာဗီဒီယို..
ဒီရိုင်ဒါကို စိန်ခေါ်နိုင်မည့်သူများအား One Championship မှထုတ်ပြန်ကြေငြာ…